Wararka - Kooxdayada
Shirkadda Nitel waxaa la aasaasey sanadkii 2010, waa shirkad soo saare aad u fiican oo ka mid ah bilowga qalabka yareynta qalabka iyo qaybaha ay ka kooban tahay. Waqtigaan la joogo, kaliya maahan kooxda hogaamineysa kooxda inay heysato habka hore ee fekerka, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin koox shaqaale farsamo oo karti leh iyo kooxda shaqaalaha oo si adag ula halgama. Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay leedahay qalab wax soo saar heer-koowaad ah iyo sidoo kale qalab hubin fiican. Shirkaddu waxay fulisaa ISO / TS 16949-2009 Nidaamka Tayada Caalamiga ah. Shirkaddeennu waxay ku leedahay bandhigga Shanghai Frankfurt sannad kasta, waxay si qoto dheer u aaminsan tahay una taageereysaa Shiinaha iyo fmacaamiisha oreign. waxaan ku kalsoonahay Nitel inay fiicnaan doonto mustaqbalka.
Nitai wuxuu isku dayayaa inuu hogaamiye ka noqdo qaybo ka mid ah suuqa baabuurta culus. Iyagoo ku tiirsan xirfadleena, kalsoonidooda, xikmaddeena, shaqo adag iyo u heellan sidii loo hormarin lahaa loona soo saari lahaa alaab tayo sare leh, shirkadu waxay ku adkeysatay wadada tayada sare leh, maaraynta adag, turxaan bixinta, iyo hal abuurka. Sanado badan, annaga alaabteenu si wanaagsan ayey macaamiisha noo soo dhoweysay. Si loo sii wanaajiyo tayada Nitai, waxaan si joogto ah u hagaajineynaa howlaha iyo maareynta nidaamka ganacsiga iyadoo loo marayo tababar iyo barasho. Shirkaddu waxay hagaajineysaa nidaamyada hawlgalka gudaha iyo maaraynta caadiga ah ee ku saleysan xaaladaha dhabta ah, waxayna si tartiib tartiib ah u aasaaseysaa hawlgal nidaamsan iyo nidaam maamul oo loogu talagalay tababarka kooxda iyo horumarinta ganacsiga, kaasoo si hufan u qaban kara jadwalka, cusboonaysiinta wax soo saarka iyo is-dhexgalka ilaha. Falsafadeena ayaa ah qanacsanaanta macaamiisha inay tahay raadintayada weligeed ah. Waxaan sii wadeynaa dhiirrigelinta adeegyo qumman, tixgelin iyo adeegyo qumman oo loogu talagalay badeecado tayo sare leh qiimo macquul ah, iskaashi muddada-dheer ah, iyo faa'iido wadaag ah.
Waxaan rajeyneynaa inaan dhisi karno wada shaqeyn muddo dheer ah dhammaan macaamiisha, waxaana rajeyneynaa inaan horumarin karno tartanka oo aan ku guuleysan karno guusha-guuleysiga wadajirka ah macaamiisha. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa macaamiisha ka kala socda daafaha dunida si ay noola soo xiriiraan wax kasta oo aad u baahan tahay! Ku soo dhawow dhammaan macaamiisha dal iyo dibadba inay soo booqdaan warshaddeena. Waxaan rajeyneynaa inaan xiriir wada-guuleysi oo guuleysi ah idinla yeelanno, oo aan berri ka sii wanaagsan abuurno.